ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း: 06/14/12
လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု(Genocide) ဆီ ဦးတည်နေပြီလား ...(နေဘုန်းလတ်)
Maung Wuntha on Thursday,
at 9:43pm ·
ကျွန်တော့်ဆီ email နဲ့ ပို့လိုက်တဲ့ ဘလော့ဂါ နေဘုန်းလတ်ရဲ့ တင်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း New Media ပညာရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ နေဘုန်းလတ်ရဲ့ လွတ်လပ်တဲ့အတွေးနဲ့ မျှတတဲ့အ မြင်ကို
ဖတ်လိုက်ရတော့ အလွန်မှ ကျေနပ်မိပါတယ်။
Nay P Latt Yesterday at 12:25am near Yangon, Myanmar ·
ယဉ်ကျေးမှုတိုင်းလိုလိုမှာ လူမျိုး၊ဘာသာ၊နိုင်ငံသား၊အသားအရောင်၊လိင် စတဲ့ ကွဲပြားခြားနားမှုတွေကို အခြေပြုပြီး ငါတို့နဲ့သူတို့ဆိုတဲ့ '' Us and Them'' ခွဲခြားမှုတွေရှိတတ်ပါတယ်။ ရန်၊ ငါ စည်းခြားတယ်လို့လဲ ဆိုနိုင်တာပေါ့။ ငါတို့ ဂျာမာန်တွေ၊ သူတို့က ဂျူးတွေ၊ ငါတို့က ဟူတူတွေ၊ သူတို့က တွတ်စီတွေ စသည်ဖြင့် လူလူချင်းအမျိုးအစား ခွဲခြားလိုက်ခြင်း (Classification) ဟာ Genocide လို့ခေါ်တဲ့ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုများ ဖြစ်ရခြင်းရဲ့ အစမှတ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ရောယှက်နေသော ဆက်နွယ်မှုတွေရှိမနေတဲ့ လူမျိုးစုနှစ်ခု ဒါမှမဟုတ် နှစ်ခုထက်ပိုပြီးရှိကြတဲ့ နိုင်ငံတွေဟာ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်နိုင်ချေများပါတယ်။ ဒီလိုမဖြစ်ဖို့ ကာကွယ်နိုင်ချေရှိတဲ့ အဓိကစွမ်းအားကတော့ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေ၊ အသားရောင်ခွဲခြားမှုတွေကိုကျော်လွန် သွားတဲ့၊ အချင်းချင်းအပြန်အလှန် စိတ်ရှည်သည်းခံမှုနဲ့ နားလည်မှုတွေကို တိုးပွားစေတဲ့၊ ပိုင်းခြားမှုတွေကို ကျော်သွားတဲ့ အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းကိုသာအားပေးတဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အစုအဖွဲ့၊ အဆောက်အအုံတွေ ဖွံ့ဖြိုးလာဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ့လို့ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းက ဘုံရပ်တည်ချက်တွေကို မဖြစ်မနေရှာဖွေလာရပြီး ... အဲဒီ့အချက်ကိုက လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုတွေကို တားဆီးနိုင်တဲ့ အဓိကစွမ်းအား ဖြစ်လာပါတယ်။ အရိုးဆုံး နဲ့ အရှင်းဆုံးပြောရရင်တော့ အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေများများလုပ်ပြီး အချင်းချင်းနွယ်ယှက်နေသော အကျိုးစီးပွားတွေ များများရှိနေတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို တည်ဆောက်ကြဖို့ပါ။
အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း (Classification) ဟာ အမျိုးအစားခွဲခြားထားရုံနဲ့တော့ သိပ်ပြဿနာမရှိသေး ပါဘူး။ သူ့နောက်ကနေ ထပ်ချပ်မကွာလိုက်လာတဲ့ ... အမည်တပ်တံဆိပ်ကပ်ခြင်း (Symbolization) ကြောင့် အခြေအနေတွေက ပိုပြီးရှုပ်ထွေးလာပါတယ်။ အုပ်စုတစ်ခုခုက အခြားအုပ်စုတစ်ခုခုကို အမည်နာမတစ်ခု ဒါမှမဟုတ် တံဆိပ်တစ်ခုကပ်လိုက်ပါတယ်။ အသားအရောင်ကိုလိုက်ပြီးဖြစ်စေ၊ အဝတ်အစားကိုလိုက်ပြီး ဖြစ်စေ၊ မတူညီသော ဘာသာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို လိုက်ပြီးဖြစ်စေ အခြားသူများကို အုပ်စုတစ်စုထဲ သွတ်သွင်းလိုက်ပြီး ... သူတို့ဟာ ဂျူးတွေပဲ၊ သူတို့ဟာ ဂျစ်ပစီတွေပဲ၊ သူတို့ဟာ နီဂရိုးတွေပဲ စသည်ဖြင့် တံဆိပ်တစ်ခုကပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် ... ခွဲခြားမှုဟာပိုပြီး ပီပြင်ထင်ရှားလာပါတယ်။ နာဇီတွေအုပ်စိုးစဉ်ကာလက ဂျူးတိုင်းကို အ၀ါရောင်ကြယ်ပုံ တံဆိပ်တပ်ခိုင်းထားတာမျိုး၊ ကမ္ဘောဒီယားမှာ ခမာနီတွေအုပ်စိုးစဉ်ကာလက အရှေ့ပိုင်းဇုံမှာရှိတဲ့ လူတွေကို အပြာရောင်လည်စည်းစီးပေးထားတာမျိုးတွေ ဟာ ထင်ရှားတဲ့ ဥပမာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုပြောသွားပြီးဖြစ်တဲ့ အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းနဲ့ အမည်တပ်တံဆိပ်ကပ်ခြင်း နှစ်ခုဟာ လူသားတွေလုပ်လေ့လုပ်ထရှိတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပြီး လူ့ဂုဏ်သိက္ခာညှိုးနွမ်းစေတဲ့လုပ်ရပ်မျိုးတွေလုပ်ဆောင်ခြင်း (Dehumanization) ဆိုတဲ့ နောက်တစ်ဆင့်ကို ဦးမတည်သေးသရွေ့တော့ မျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်ခြင်းတစ်ခု ဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး။ အမည်အမှတ်တံဆိပ်တပ်ခြင်းတွေ ပပျောက်ဖို့ကတော့ မုန်းတီးမှုကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အမှတ်သင်္ကေတတွေကို တရားဥပဒေအရကို တားမြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဂိုဏ်းကဏ္ဍတစ်ခုခုကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ အ၀တ်အစားတွေ ဝတ်ဆင်ခြင်းကိုလဲ ကန့်သတ်သင့်ပါတယ်။
ပြဿနာတစ်ခုရှိတာက ဥပဒေအရကန့်သတ်တားမြစ်ခြင်းတွေဟာ လူကြိုက်များနေတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအင်အားတွေရဲ့ ထောက်ပံ့မှုမျိုးကိုမရတဲ့ အခါ အရာမထင်တတ်ပါဘူး။ ဥပမာအားဖြင့် ... ဟူတူ၊ တွတ်စီ စတဲ့စကားလုံးတွေဟာ ... ၁၉၈၀ခုနှစ်အထိ ရဝမ်ဒါဘာသာစကားအရ တားမြစ်ကန့်သတ်ထားပေမယ့် ... အများကလက်ခံသုံးစွဲ ခဲ့တာကြောင့် အတည်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
တတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာညှိုးနွမ်းစေခြင်း (Dehumanization) ဖြစ်စဉ်ကတော့ အားကြီးတဲ့ အုပ်စုက အားနည်းတဲ့ အုပ်စုရဲ့ လူသားဖြစ်တည်မှုကို ငြင်းဆန်ချင်လာရာကနေ စပါတယ်။ အမျိုးအစား ခွဲခြားပြီး အမည်တံဆိပ်တစ်ခုခုတပ်လိုက်တဲ့ အစုအဖွဲ့လေးတွေကို တိရစ္ဆာန်တွေ၊ ရောဂါသည်တွေ၊ အဆင့်နိမ့်သူတွေ နဲ့ တတန်းတစားတည်းထားလိုက်ပြီး ... လူသားအဖြစ်ကနေ ယုတ်လျော့သူတွေအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်ကြပါတယ်။ လူဂုဏ်သိက္ခာညှိုးနွမ်းစေခြင်းဟာ ... သာမာန်ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေထက် အများကြီးပိုဆိုးပါတယ်။ အဲဒီ့အဆင့်မှာဆိုရင် ... အမုန်းတရားကိုတိုးပွားစေတဲ့ ၊ ဒေါသကိုလှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ ဝါဒဖြန့်စာတွေ၊ ပုံတွေ၊ အသံလွှင့်မှုတွေကို ခပ်များများသုံးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ... လူထုအနေနဲ့ မြင်ရကြားရသမျှတွေဟာ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု တွေကိုဦးတည်တဲ့ လှုံ့ဆော်မှုတွေလား၊ အမှန်တကယ် လူထုကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်လိုစိတ်နဲ့ ပြောတာတွေလားဆိုတာကို ခွဲခြားတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ကြတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ ... လှုံ့ဆော်မှုတွေကို တန်ပြန်ချေဖျက်ပစ်နိုင်တဲ့ စည်းစနစ်ကျသော၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ ညီညွတ်သော ကာကွယ်မှု၊ သတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေအားနည်း တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ လှုံ့ဆော်မှုတွေ တောက်လျှောက်လုပ်နေတဲ့ အမုန်းတရား တိုးပွားစေသော ဝါဒဖြန့်မှုတွေကို အမြန်ဆုံးတားမြစ်ကန့်သတ်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အမုန်းတရားနဲ့ ကျူးလွန်သော ရာဇ၀တ်မှုတွေ၊ ကြီးနိုင်ငယ်ညှင်းသတ်ဖြတ်မှုတွေကို ထိထိရောက်ရောက် ဖော်ထုတ်အရေးယူဖို့လဲ လိုအပ်ပါတယ်။
အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း၊ တံဆိပ်ကပ်ခြင်း၊ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာညှိုးနွမ်းစေခြင်းစတဲ့ အဆင့်တွေနောက် မှာတော့ မိမိတို့ မဟုတ်သော အခြားအုပ်စုကို နှိပ်ကွပ်ဖျက်သိမ်းပစ်လိုတဲ့ အစုအဖွဲ့တစ်ခုခုက ... နောက်လာမယ့်အဆင့်တွေကို လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် ... အခိုင်အမာဖွဲ့စည်းခြင်း (Organization) ဆိုတဲ့ အလုပ်ကို စလုပ်ပါတော့တယ်။ များသောအားဖြင့် ... လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုတွေကို အစိုးရတစ်ရပ်ရပ်(သို့မဟုတ်) အကြမ်းဖက်အုပ်စုတစ်ခုခုက စုစည်းဆောင်ရွက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန် ဖို့အတွက် တိုက်ခိုက်ရေးအစုအဖွဲ့လေးတွေဖွဲ့ပြီး လေ့ကျင့်ပေးတာမျိုး၊ လက်နက်တပ်ဆင်ပေးတာမျိုးတွေ ကိုစတင်ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ... လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုတွေအတွက် အစီအစဉ်ကို စနစ်တကျရေးဆွဲပါတယ်။ ဒီလိုအဆင့်မျိုးကို ကာကွယ်ဖို့ကတော့ ... အဲဒီ့လိုလုပ်ဆောင်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးဖော်ထုတ်ပြီး တရားဥပဒေအရ အပြစ်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အုပ်စုများခွဲထုတ်ခြင်း (Polarization) လို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာတော့ ... အစွန်းရောက်တွေက အမုန်းတရားကို တိုးပွားစေတဲ့ ဝါဒဖြန့်မှုတွေကိုသုံးပြီး အုပ်စုတွေအများကြီးဖြစ်အောင်ခွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။ အချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင် ... လူမျိုးခြားမယူရ၊ လူမျိုးခြားနှင့်မဆက်ဆံရ စတဲ့ ဥပဒေတွေတောင်ထုတ်ပြန်လေ့ ရှိပါတယ်။ အစွန်းရောက်သမားတွေဟာ ... ကြားအမြင်ရှိသူတွေကိုလည်း ပစ်မှတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ... ကြားအမြင်ရှိသူတွေကိုကာကွယ်ခြင်း၊ အစွန်းမရောက်သော သမာသမတ်ကျတဲ့အမြင်မျိုးတွေကို များများပြန့်နှံ့စေခြင်းနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကို ပံ့ပိုးကူညီခြင်းအားဖြင့် ... အစွန်းရောက်အမြင်တွေကနေ ကင်းလွတ်နိုင်ပါတယ်။ အစွန်းရောက်သမားတွေဟာ ... ပစ်မှတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ အစုအဖွဲ့တစ်ခုခုကို သူတို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုတွေကို အကြောင်းပြု ခွဲခြားရွေးထုတ်(Identification)ပြီး သတ်ဖြတ်ရမယ့် စာရင်းကိုပါ ရေးဆွဲလေ့ရှိပါတယ်။ ကျူးလွန်ခံကြရတော့မယ့် လူအုပ်စုဟာ တံဆိပ်တစ်ခုခုကပ်ခံရတာမျိုး၊ တစ်နေရာရာကို အတင်းပို့ခံရတာမျိုးတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ နာဇီတွေဂျူးလူမျိုးတွေအားလုံးကို ... ချွေးတပ်စခန်းတွေဆီပို့တာမျိုး၊ ဂတ်တိုလို့ခေါ်တဲ့ သီးခြားရပ်ကွက်တွေဆီပို့တာမျိုး၊ စားနပ်ရိက္ခာခေါင်းပါးပြီး ငတ်ပြတ်သေသွားနိုင်တဲ့ နေရာတွေဆီ အင်အားသုံးပို့ဆောင်တာမျိုးတွေဟာခွဲခြားရွေးထုတ်ခြင်း (Identification) ရဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ့နောက်မှာတော့ Genocide လို့ခေါ်တဲ့ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုတွေဟာလျှင်လျှင်မြန်မြန်တရားဝင် စတင်လာပါတော့တယ် ...။ ဒီဖြစ်စဉ်ကို သတ်ဖြတ်သူတွေဘက်ကတော့ သူတို့ရဲ့ ပစ်မှတ်သားကောင်တွေကို လူအဖြစ်မသတ်မှတ်တော့တာကြောင့် အမြစ်ဖြတ်ချေမှုန်းခြင်း (Extermination) လို့အမည်တပ်ကြပါတယ်။ အဲဒီ့လိုအဖြစ်အပျက်မှာ ကျူးလွန်ခံရတဲ့သူတွေဘက်က ရှိတဲ့အားနဲ့ ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်တာမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါ အပြန်အလှန်သတ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်လာပြီး နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်ခြင်း သံသရာထဲကို ကျရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့တော့ ... (Denial) လို့ခေါ်တဲ့ ငြင်းပယ်ဖုံးကွယ်ခြင်းအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ လူမျိုးသုဉ်း သတ်ဖြတ်ခြင်းဖြစ်စဉ်တွေ အပြီးမှာ ကျူးလွန်သူတွေတိုင်းလိုလိုပြုလုပ်တတ် ကြတဲ့အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သတ်ဖြတ်ခံရသူတွေရဲ့ အသက်မဲ့ခန္ဓာတွေကို ကျင်းကြီးတွေတူးပြီး မြှုတ်နှံခြင်း၊ မီးရှို့ဖျက်စီးခြင်း၊ အထောက်အထားတွေကို ဖြောက်ဖျက်ခြင်း၊ မျက်မြင်သက်သေများအား ခြိမ်းခြောက်နှုတ်ပိတ်ခြင်း တွေကို ပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ နောက်ပြီး ... သူတို့ဟာ သူတို့တွေ ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကို ငြင်းဆန်တတ်ကြပြီး ... အမြဲလိုလို အကျူးလွန်ခံရသူတွေအပေါ် ပြစ်တင်ပြောဆိုတာမျိုးတွေလုပ်တတ်ပါတယ်။ ကျူးလွန်သူအများစုဟာ ... ပြဿနာကိုအမြဲရှောင်လွှဲပြီး အခြားသူတွေအပေါ်ပုံချဖို့ကြိုးစားတတ်ကြပါတယ်။
ကျနော်တို့တိုင်းပြည်မှာ အခုဖြစ်နေတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေဟာ ... လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုတွေဆီ ဦးတည်သွားနိုင်လား ...။ ဦးတည်နေတယ်ဆိုရင်လည်း အဲဒီ့လိုမဖြစ်ရအောင် ကျနော်တို့တွေဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ။ ကျနော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့ အထက်မှာရေးထားတဲ့ အဆင့်တွေထဲက ဘယ်အဆင့်ကိုရောက်နေပြီလဲ ဆိုတာလေးကို အားလုံးဝိုင်းစဉ်းစားကြည့်ကြဖို့ လိုမယ်ထင်ပါတယ်။ ဘယ်သူကမှ ဘယ်သူ့ကို အပြီးသတ်ချေမှုန်းပစ်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလို့ ကျနော်ယူဆပါတယ်။ ကိုယ့်လူမျိုးကို ချစ်ကြောင်း သေချာစေဖို့ ကျနော်တို့တွေ အခြားလူမျိုးတွေကို မုန်းတီးပြနေဖို့လဲ မလိုပါဘူး။ အခုလောလောဆယ် ရခိုင်မှာဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေကို ကိုင်တွယ်ပုံမှားယွင်းရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ ပြဿနာရဲ့ အချိန်ကြာမြင့်လာပြီး အခြားသောဒေသတွေကိုပါ ပြန့်ပွားဆိုးဝါးလာရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု(Genocide) ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင် ... မြန်မာနိုင်ငံသား အမြောက်အများ သေကြေပျက်စီးခြင်းနဲ့အတူ ကမ္ဘာမှာ မြန်မာနိုင်ငံ သိက္ခာကျပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့တွေအားလုံး ဘာပဲလုပ်လုပ် ... ကိုယ့်လုပ်ရပ်တစ်ခုခုဟာ တိုင်းပြည်ကို အန္တရာယ်တစ်ခုခုဆီတွန်းပို့နေတဲ့လုပ်ရပ်မျိုးဖြစ်နေမလား၊ တိုင်းပြည်ကို အန္တရာယ်မကျရောက် အောင် ကာကွယ်တဲ့လုပ်ရပ်မျိုးလားဆိုတာကို မှန်မှန်ကန်ကန် ဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်ကြပါစေ။ ပြီးတော့
· ... ကိုယ်ရေးသမျှ၊ ကိုယ်ပြောသမျှ၊ အွန်းလိုင်းပေါ်မှာ ကိုယ်တင်သမျှတွေကိုလည်း တာဝန်ယူတတ်ကြပါစေ။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 11:39 PM No comments:
ရန်ကုန်မြို့၊ကမ်းနားလမ်းမှာရှိတဲ့ ဗြိတိန်သံရုံးရှေ့ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးဆန္ဒပြ
ဒီနေ့မနက် ၁၀ နာရီခွဲက ရန်ကုန်မြို့၊ကမ်းနားလမ်းမှာရှိတဲ့ ဗြိတိန်သံရုံးရှေ့မှာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား လူငယ်များဟာ
အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ရေးသားထားတဲ့ ပိုစတာတွေကိုင်ဆောင်ပြီး Burma Campaign UK နဲ့ BBC အသံလွှင့်ဌာန
တွေကို ရိုဟင်ဂျာတွေကို မြန်မာတိုင်းရင်းသား အဖြစ်မှားယွင်းစွာ ဘက်လိုက်ဖေါ်ပြတဲ့ ကိစ္စ ကို ကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့
ပြီးတော့ လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ပဋိပက္ခ ဟာ ရခိုင်လူမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ
ရဲ့ ပဋိပက္ခ လို့ ပြည်ပမီဒီယာအချို့ရဲ့ ရေးသားဖေါ်ပြချက်တွေဟာ ဘာသာရေးအထိကရုဏ်းဖြစ်အောင် သွေးထိုးနေတာ
ဖြစ်ပြီး အမှန်တကယ်က မြန်မာတိုင်းရင်းသားရခိုင် တွေနဲ့ တရားမ၀င်ရောက်ရှိနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာ တွေရဲ့ ပဋိပက္ခသာ
ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ မီးရှို့အကြမ်းဖက်မှုတွေစတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့တာဟာ ရိုဟင်ဂျာတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။
အချိန် ၁၀ မိနစ်ခန့်သာဆန္ဒပြခွင့်ရပြီး လုံခြုံရေးတွေက လူစုခွဲပေးဖို့ ကောင်းမွန်စွာ မေတ္တာရင်ခံခဲ့တဲ့အတွက်
ထူးခြားတာက နိုင်ငံခြားသား သတင်းထောက်တွေကပါ ရခိုင်လူငယ်တွေကို သိလိုတာတွေမေးမြန်းသွားခြင်းပါ။
ဗြိတိန်သံရုံး အရာရှိတွေကလည်း ဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင် ရခိုင်လူငယ်တွေကို သူတို့သံရုံးထဲကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့
လက်ကမ်းစာရွက်တွေပေးရင် လက်ခံယူပေးဖို့ကိုပါ သံရုံးဝန်ထမ်းတွေကို ညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 11:19 PM No comments:
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖြေခဲ့တာကတော့ တိုင်းပြည်မှာ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးဟာ အရေးကြီးပါတယ်
there are illegal immigrants from Bangladesh... rule of law is needed that includes law of citizenship and immigration too...
ILO က ဆွေးနွေးပွဲမှာ .. ရိုဟင်ဂျာတွေကို မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလို သတ်မှတ်ပါသလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ဒုတိယ အကြိမ် သတင်းထောက်တစ်ယောက်က ထပ်မေးပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖြေခဲ့တာကတော့ ...
ကဲ ... ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ လူတွေကို နိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုဖို့တောင် ရှင်းလင်းတဲ့ ဥပဒေလိုအပ်တယ်ဆိုတာ .. တိကျတဲ့ စနစ် လိုအပ်တယ် ဆိုတာ သေချာ ပြောပြီဖြစ်တဲ့။ .. အဲဒီလူတွေကို အလိုအလျောက် နိုင်ငံသား အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုဖို့ဆိုတာ မလွယ်သေးဘူးလို့ ဖြေလိုက်တာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလူတွေဟာ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်လာတဲ့ တရားမဝင် နေထိုင်သူတွေ ဖြစ်နိုင်တယ် .. လို့ ပြောလိုက်တာပါပဲ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နေရာ၊ ဖြေရတဲ့ နေရာကနေ ဒီလောက်အထိ ဖြေတယ်ဆိုတာ .. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘာမှ မပြောဘူးလို့ ဆိုတဲ့သူတွေ နားလည်သင့်ပြီ ထင်ပါတယ်။ သူမ အနေနဲ့ ဒီထက် ထက်ပြောဖို့ မသင့်သလို .. အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ အမုန်းတရား ပွားမယ့် စကားတွေကိုလည်း ပြောဖို့ မလိုပါ။
(Daw Aung San Suu kyi, ILO conference, 14 June 2012)
ဒေါ်စုဖြေတာ Politically correct ဖြစ်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ Yes No လို့ ဘလိုင်းကြီးဖြေတာထက် အများကြီး လိမ္မာပါးနပ်တဲ့ အဖြေပါ။
နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ ဖြစ်နေတဲ့ တရားမ၀င် ၀င်ရောက်မှုတိုင်းရဲ့ '' အဓိက '' တရားခံကတော့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေ ထိရောက်မှုအတိုင်းအတာရယ်၊ အကျင့်ပျက်ခြစားတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ့ရယ်ပါဘဲ ။
ဒီအချိန်မှာ ရိုဟင်ဂျာကို နိုင်ငံသားအဖြစ်လက်ခံသင့်သလားဆိုတဲ့ ညှပ်ပူးညှပ်ပိတ်မေးခွန်းကို Yes No လို့ အတိအကျ ဖြေတာထက် နိုင်ငံ ၂ နိုင်ငံကြားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဥပဒေကို ထိရောက်အောင် လုပ်ရမယ် ဆိုတာက ပိုပြီး သင့်တော်တဲ့ အဖြေလို့ မြင်မိပါတယ်။
( အင်း .......ဒေါ်စု ပညာရှိလို့သာ တော်တော့တယ်။ သကောင့်သားတွေကလည်း မလွယ်ဘူးတော့ ။ ထင်တဲ့ အတိုင်းဘဲ ။ ၂ ခါတောင် ဘလိုင်းကြီးမေးတာ ......ဟူး......)
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 10:48 PM No comments:
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဂျီနီဗာမြို့ ILO ညီလာခံမှာမြန်မာပြည် ၏ ပြည်သူလူထု ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏မိန့်ခွန်း
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ကမ္ဘာ့အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ် (ILO) ရဲ့အကြီးအကဲကိုယ်တိုင်က တလေးတစား ကြိုဆိုရုံသာမက ILO ညီလာခံတက်ရောက်ကြသူများအားလုံးက နှစ်နှစ်ကာကာ ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုကြတဲ့ မြန်မာလူမျိုးများ ဂုဏ်ယူဖွယ် မြင်ကွင်းပါ ..ဖိုင်ကို သေချာကြည့် ပါ။
အသံဖိုင် အားနားဆင်နိုင်ရန် တင်ပေးထားခဲ့ပါတယ်။
http://www.ilo.org/global/meetings-and-events/events/aung-san-suu-kyi/lang--en/index.htm ဒီလင့်မှာ ဒေါ်စု မိန့် ခွန်းပြောပါတော့မယ်
Ms. Aung San Suu Kyi, Chairperson of the National League for Democracy in the Republic of the Union of Myanmar will address the International Labour Conference of the ILO at the Palais des Nations in Geneva on Thursday 14 June.
Her visit will be featured live on this page via webcast beginning at 10:15 am (Geneva time) / 08:15 GMT
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဂျီနီဗာမြို့ ILO ညီလာခံမှာမြန်မာပြည် ရဲ့  ပြည်သူလူထု ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏မိန့်ခွန်း
မြန်မာလူငယ်အများစုမှာ အလုပ်မရှိတာထက် မျှော်လင့်ချက် မရှိတာက
ပိုဆိုးတယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားသွားပါတယ်။
ဂျနီိဗာ မှ Daw Aung San Suu Kyi မိန့် ခွန်း from kotunwai on Vimeo.
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 5:31 PM No comments:
မာန် ဟုန် ခွင်း on Thursday, June 14, 2012 at 1:38pm
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 5:01 PM No comments:
ရာပြည့်အထိမ်းအမှတ် from kotunwai on Vimeo.
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 4:01 PM No comments:
ရခိုင်ပြည်နယ်က ဒုက္ခသည်တွေကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ဒီကနေ့ စတင်ကူညီနေပြီလို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အခုဖြစ်နေတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်က အရေးအခင်းဟာ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခ မဟုတ်သလို၊ ရိုဟင်ဂျာအရေးလည်း မဟုတ်ဘဲ ရာဇဝတ်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ NLD သဘာပတိအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦးက ပြောပါတယ်။
ဦးတင်ဦးကို RFA ဝိုင်းတော်သား ကိုနေရိန်ကျော် ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာနားဆင်နိုင်ပါတယ်။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 3:40 PM No comments:
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 3:35 PM No comments:
နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုယူရန် ဂျနီဘာလေဆိပ် သို့အမေစုရောက်ရှိ
Daw su arrive in ဂျနီဘာ လေဆိပ် from kotunwai on Vimeo.
14.6.2012 နေ့ တွင် နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုယူရန် ဂျနီဘာလေဆိပ် သို့အမေစုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 3:29 PM No comments:
CNN ရဲ.သတင်းမှား ကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ
CNN ရဲ.သတင်းမှားကို ၄င်းတို.ကိုယ်တိုင် ပြန်ဖျက်လိုက်ရပါပြီ.............
( သက်တန်.ချို )
အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော် နိုင်ငံနှင့်လူမျိုး အတွက် ဘ၀ကိုရင်းပြီး အနစ်နာခံဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အမေ့အပေါ်သားတို့ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးကဦးညွှတ်အလေးပြုနေကြမှာဖြစ်ပါသည်။ အမေသည်ရှားပါးလွန်းလှသောသားတုိ့နိုင်ငံ၏ ရတနာတစ်ပါးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံသားတိုင်း သည် အမေ့ကိုတန်ဖိုးထားကြရန်လိုသည်။ ယနေံသွားရောက်မည့် အမေ့၏ ဥရောပနိုင်ငံများခရီးစဉ်ကိုချွင်းချက်မရှိထောက်ခံဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကွဲကွာနေခဲ့ရသောမိသားစုနှင့်ပြည်လည်ဆုံတွေ့ကာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့နိုင်စေဖို့ သားတို့ ကဆုတောင်းလိုက်ပါသည်။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 1:49 PM No comments:
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 1:25 PM No comments:
စစ်တွေတွင် "တုတ်၊ ဓါး၊ လက်နက် မကိုင်ဆောင်ရ" အမိန့်ထုတ်
ရိုအင်ဂျာများ တိုက်ခိုက်လာပါက ကာကွယ်နိုင်ရန် ၀ါးချွန်များကိုင်ဆောင်ထားသော ရခိုင်သမီးပျိုများ
ဆူပူ အကြမ်းဖက်မူ ဖြစ်ပွားနေသော စစ်တွေတွင် တုတ်၊ ဓါး လက်နက်များ ကိုင်ဆောင်၍ လမ်းများပေါ်တွင် မသွားလာရဟု ယနေ့ နံနက်က အာဏာပိုင်များက အမိန့်ထုတ်ကြောင်း သိရသည်။
၎င်းအမိန့်ကို မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက လက်မှတ်ထိုး ထုတ်ပြန်ခြင်း ဖြစ်ပြီး ယနေ့နံနက်က အသံချဲ့စက်ဖြင့် မြို့ကို ပတ်ကာ ကျေညာသွားသည်ဟု ဒေသခံ တစ်ဦးက ပြောသည်။
“ သူတို့က ဒီကနေ့ မနက်က ထပ်ပြီး ကားနဲ့ မြို့ကို ပတ်ပြီး အသံချဲ့စက်နဲ့ ကျေညာသွားပါတယ်။ နောက်က အချုပ်ကားတစ်စီးလည်း တွေ့တယ်ဗျာ။ အရင်က အရေးပေါ် ကျေညာထားပေမယ့် အခုမှဘဲ တုတ်ဓါးတွေကို ကိုင်ပြီး လမ်းပေါ် မသွားလာရ ဆိုပြီး အမိန့်ထုတ်တာကို တွေ့ရပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
အာဏာပိုင်များ အနေဖြင့် စစ်တွေမြို့ပေါ်ရှိ ပြည်သူများ၏ အသက်အိုးအိမ်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မူလည်း မပေးနိုင်သည့် အပြင် ယခုတခါ တုတ်ဓါးများကိုလည်း မကိုင်ဆောင်ရဟု အမိန့်ထုတ်သဖြင့် အာဏာပိုင်များ၏ လုပ်ရပ် အပေါ် မြို့ခံ ပြည်သူက နားမလည်အောင် ဖြစ်နေကြရသည်ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
“ အာဏာပိုင်တွေက ကျွန်တော်တို့မြို့ကိုလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်တာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်ကိုကိုယ် ကာကွယ်ဖို့ ကိုင်ထားတဲ့ တုတ်ဓါးတွေကိုလည်း မကိုင်ရဘူးဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ လုံခြုံရေး အတွက် အထူး အခက်အခဲ ကြုံတွေ့နေရပါပြီ” ဟု သူက ပြောသည်။
ယနေ့တွင် စစ်တွေတွင် မိုးသည်းသည်းမဲမဲ ရွာသွန်းနေသဖြင့် လမ်းပေါ်ထွက်သွားလာနေသူများလည်း မရှိသလောက် ဖြစ်နေပြီး အခြေအနေမှာလည်း အေးဆေး ငြိမ်သက်နေကြောင်း သိရသည်။
ယနေ့ နေ့လည် (၁) နာရီက ဆူပူ အကြမ်းဖက်သူများ၏ လက်ချက်ဖြင့် သေဆုံးခဲ့ရသူ မင်းဂံ အကွက် (၂)မှ ကိုလှဌေးကို ဘုန်းကြီး သချိုင်းတွင် သဂြိုလ်ခဲ့သည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 1:14 PM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာများရဲ့ပစ်မှတ်က...ကို
ရဘို့...သူတို့လူမျိုးဟာ စုစုပေါင်း သုံးသန်းကျော်မှာရှိတယ်...တစ်သန်းလောက်က မြန်မာ့မြေ
ပေါ်မှာရှိနေတယ်....။ သူတို့မှာ နိုင်ငံမရှိဘူး( ရိုဟင်ဂျာဆို မရှိတာပါ ) ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာ ခေါ့ဒ်
ဆိုတဲ့ အမည်နဲ့ ဇာတ်နိမ့်မျိုးနွယ်စုအဖြစ်ရှိပါတယ်...ဒီတော့...အခုလို အကြမ်းဖက် လုပ်ရပ်တွေ
လုပ်နေပုံနဲ့..လူထုက မထောက်ခံပုံနဲ့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်မပြောနဲ့ နိုင်ငံတွင်းခြေချခွင့်တောင်
မလွယ်တဲ့အနေထား..ဒါကို ရိုဟင်ဂျာ ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့သူတွေ စဉ်းစားသင့်တယ်..ခင်ဗျားတို့
လူမျိုးတွေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာ ဘယ်လိုနေရသလည်း..အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ချင်း အတူတူ..ဒီလို
လုပ်လို့ရသလား...အားလုံးဟာ အကျဉ်းထောင်ထဲမှာနေရသလောက်နီးပါး..နေနေရတာ မဟုတ်
လား...ရောက်ရာအရပ်မှာ မစင်ထုတ်ဖြစ်နေတော့...တိုင်းပြည်တော်တော်များများက အကြောင်း
တွေက ဒီလောက်အကြင်နာမမဲ့ကြပါဘူးဗျာ..။ ရိုဟင်ဂျာ ရဲ့ အဓိကပြသနာ ကို ကျနော်မြင်တာ
ဒဲ့ပြောမယ်..ရိုင်းရင်ခွင့်လွှတ်ပါ ( ရောက်ရာ အရပ် မစင်ထုတ်ဖြစ်နေတဲ့ပြသနာ ) ဒါပဲ...။
ရိုဟင်ဂျာ ခေါင်းဆောင်ဆိုသူများကို ပြောချင်တယ်...ခင်ဗျားတို့လူမျိုးတွေရဲ့အကျင့်
ဆိုးတခုဖြစ်တဲ့...အစမှာ..သနားအောင်နေတယ် ပြောတယ် ဆက်ဆံတယ်..နည်းနည်းလေး အ
ခွင့်သာလာတာနဲ့..မစင်ထုတ်လုပ်တော့တာပဲ။ အဲဒီ အကျင့်ဆိုးကို အရင်ဆုံးပြင်နိုင်အောင် ကြိုး
စားပါ...။ ထိုင်း ပင်လယ်မှာ ဖမ်းမိတယ် ရိုဟင်ဂျာ ရာကျော်ကို ဘယ်လိုလုပ်ခံရသလည်း သိမှာ
ပါ...မော်တော်ကြီးကို အင်ဂျင်ဖြုတ်၊စားစရာ ရေ ကအစ အကုန်သိမ်း ပင်လယ်ထဲမြှောလိုက်တာ
မဟုတ်လား .အယောက် ၉၀ ကျော်သေကုန်တာပဲ နည်းနည်းပဲကျန်တယ်..( ထိုင်းက ဒီ အကျင့်
ဆိုးတွေကို သိထားတာကိုး )။ ခင်ဗျားတို့ကို နိုင်ငံတွေက လက်မခံတာ..ဘာသာ ၊ လူမျိုး
ကြောင့်မဟုတ်ဘူး....( ရောက်ရာအရပ်..မစင်ထုတ်..လုပ်တတ်လို့ )...
ခင်ဗျားတို့ နောက်က ကြိုးကိုင်နေတဲ့ ( RSO ) ဆိုတဲ့ အစ္စလမ်မစ် စစ်သွေးကြွ
အဖွဲ့ဆိုရင်..တခြားဘာသာဝင်တွေ မပြောနဲ့...အစ္စလမ်ဘာသာမှာ သဘောထား ပျော့ပြောင်း
သူများကိုတောင်...ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာ သတ်ဖြတ်ခဲ့တာမဟုတ်လား.....။ဒါကို မြန်မာ မွတ်စလင်
များလည်း သိထားသင့်ပါတယ်...။( အထောက်အထားတွေ အင်တာနက်ပေါ်မှာ အကုန်ရှိပါတယ်).......ဆိုတော့ ဘာသာကြောင့် လူမျိုးကြောင့် လက်မခံတာဆိုရင် နိုင်ငံတော်
တော်များများမှာ အာဖရိက က မွတ်စလင်တွေ လက်ခံထားတာ အများကြီးပါ..သန်းနဲ့ချီ ရှိပါ
တယ်..ဘာပြသနာ ဘာသံမှကြီးကြီးမားမား ထွက်မလာဘူး။
ကဗ္ဘောဒီးယားက လူမျိုးနွယ်စုတခုကို အစပိုင်းမှာ နိုင်ငံတော်တော်များများက လက်မခံခဲ့ဘူး နောက်ဆုံးမှာ လာအိုနိုင်ငံကလက်ခံသွားခဲ့တယ်(လက်ခံချင်အောင်နေကြတာကိုး )။အဲဒီတော့ကာ..ရိုဟင်ဂျာ ခေါင်းဆောင်ဆိုသူများကို...တခုပြောလိုက်ချင်တယ်..
ဋ္ဌာနေများအဖြစ် ( အာဖဂန်နစ္စတန်မှာလို ) လုပ်ချင်တဲ့ အကျင့်ဆိုးကလည်း...ခင်ဗျားတို့ကို
လူ့အခွင့်ရေး တစာစာအော်နေတဲ့ နိုင်ငံတွေ..သိပ်ကြင်နာတတ်ရင်..ခင်ဗျားတို့
နိုင်ငံတွေမှာ ခေါ်ထားလိုက်.....။ အာဖဂန်တို့...ကက်ရ်ှမီးယား ဒေသတို့လို နေရာတွေမှာ သူတို့
စစ်သွေးကြွ အကြမ်းဖက်သင်တန်းတွေ တက်စရာမလိုတော့ဘူး...ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံတွင်းမှာပဲ..
မှတ်ချက် ...( ကျနော်တို့ ထောင်ထဲမှာနေတုန်းက အများစု ဒုက္ခရောက်အောင် အမျိုးမျိုး
ပြသနာရှာတတ်သူကို ချီးထုတ် လို့ခေါ်တယ်ဗျ )
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 1:11 PM No comments:
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် ကုလ ကိုယ်စားလှယ် ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး ဆွေးနွေး
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် နှင့် Peace Donor Support Group (PDSG) ကိုယ်စားလှယ်များ နေပြည်တော်တွင် ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့က တွေ့ဆုံစဉ် (ဓာတ်ပုံ - သမ္မတရုံး ဝက်ဘ်ဆိုဒ်)
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လတ်တလော ဖြစ်ပွားနေသော အကြမ်းဖက်မှုများ၊ မတည်ငြိမ်မှုများကြောင့် အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေညာထားသည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေသော မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ဗီဂျေ နမ်ဘီယားနှင့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်တို့ ယမန်နေ့က နေပြည်တော်တွင် ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
“သူနဲ့ သမ္မတနဲ့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာက ကျယ်ပြန့်တဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ အကြမ်းဖက်မှုသံသရာ မလည်စေဖို့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေညာတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးတို့ကို လေးစားပြီး အခြေအနေတွေကိုလည်း ပွင့်လင်းမြင်သာအောင် ကိုင်တွယ်လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုတာတွေ ဆွေးနွေးခဲ့တာပါ” ဟု ကုလသမဂ္ဂ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Martin Nesirky က နယူးယောက်မြို့တွင် ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောသည်။
ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ အထူးအကြံပေးလည်းဖြစ်၊ ဒု အတွင်းရေးမှူးချုပ်လည်းဖြစ်သည့် မစ္စတာ နမ်ဘီယားသည် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အား လာမည့် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံသို့ တက်ရောက်ရန် မျှော်လင့်ကြောင်းလည်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
မစ္စတာ နမ်ဘီးယားသည် Peace Donor Support Group (PDSG) အဖွဲ့နှင့်အတူရော သီးခြားစီပါ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် ယမန်နေ့က တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်သည်။
မစ္စတာ နမ်ဘီယားက ငြိမ်ချမ်းရေး အလှူရှင်များအဖွဲ့အနေဖြင့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေး ရန်ပုံငွေအတွက် ကနဦး အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၅ သန်း ထည့်ဝင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး လက်တွေ့ လုပ်ငန်းစဉ်များ စတင်ချိန်တွင် ကုလသမဂ္ဂက ထပ်မံ ထည့်ဝင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အား ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး ဗဟိုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အနေဖြင့် PDSG မှ ဦးဆောင် ဆက်သွယ်နိုင်ငံဖြစ်သည့် နော်ဝေနိုင်ငံ၊ ကုလသမဂ္ဂ၊ သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့် ဥရောပ သမဂ္ဂတို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များကလည်း တွေ့ဆုံကာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအကြောင်း ဆွေးနွေးကြသည်။
အဆိုပါ တွေ့ဆုံမှုဆွေးနွေးမှုတွင် လတ်တလော ဖြစ်ပွားနေသည့် ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခများသည် ရှုပ်ထွေးသော နောက်ခံ သမိုင်းကြောင်းများအပေါ် အခြေခံနေကြောင်း၊ သံတမန်များ၏ စိုးရိမ်မှုကိုလည်း နားလည်ကြောင်း PDSG ကိုယ်စားလှယ်များကို သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တိုင်းပြည် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက် ပြည်တွင်း လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၁၁ ဖွဲ့အနက် ၁၀ ဖွဲ့နှင့် တဖွဲ့ချင်း ထိတွေ့ ဆက်သွယ်ပြီး နားလည်မှုများ ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်း၏ အဓိက ငွေကြေး၊ နည်းပညာနှင့် အတွေ့အကြုံကောင်းများဆိုင်ရာ အကူအညီများ လိုအပ်ကြောင်းလည်း ဦးသိန်းစိန်က ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု အစိုးရသတင်းစာများတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထို့အပြင် ဥရောပ သမဂ္ဂအနေဖြင့် စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုများအား နော်ဝေ၊ သြစတြေးလျ စသည်တို့ကဲ့သို့ ဖြေလျှော့ပေးစေလိုကြောင်း ဦးသိန်းစိန်က တိုက်တွန်းခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေး ဗဟိုဌာန (Myanmar Peace Center) ကို ထူထောင်ထားပြီး (PDSG) အဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းကာ မဟာဗျူဟာ လုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နော်ဝေ သံအမတ်ကြီးက မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် နော်ဝေ နိုင်ငံအနေဖြင့် အလှူရှင်နိုင်ငံများနှင့် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းများအကြား ဆောင်ရွက်ပေးရန် တာဝန်ယူထားကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သြစတြေးလျ သံအမတ်ကြီးက ကျန်းမာရေး လုပ်ငန်းများအတွက် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၅ သန်း ထည့်ဝင်ပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် မြေမြှုပ်မိုင်းရှင်းလင်းရေးတွင်လည်း အကူအညီပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်သံအမတ်ကြီးက ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် လတ်တလော လိုအပ်သည့် နေရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅ သန်းထည့်ဝင်ကြောင်း၊ လာမည့် ၃ နှစ်အတွင်း အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၃၀၀ ပေးအပ် ကူညီသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ဦးသိန်းစိန်အား ဗြိတိန်နိုင်ငံသို့ လာရောက်လည်ပတ်ရန် ဗြိတိန် ၀န်ကြီးချုပ်က ဖိတ်ကြားပါကြောင်းများ ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ဥရောပ သမဂ္ဂ၏ ဌာနေကိုယ်စားလှယ်က ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဘက်စုံ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ဥရောပ သမဂ္ဂက ယူရိုငွေ သန်း ၁၅၀ ထောက်ပံ့မည်ဟု ကြေညာထားကြောင်း၊ ကနဦး ယူရိုငွေ ၃ သန်း သို့မဟုတ် ၄ သန်း လျာထားကြောင်း ပြောဆိုသည်။
ကမ္ဘာ့ဘဏ် ကိုယ်စားလှယ်က ကြွေးမြီဆပ်ရေး ဆွေးနွေးပြီးလျှင် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများအတွက် အတိုးနှုန်းသက်သာသည့် ချေးငွေ အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၃၀၀ ကို နှစ်စဉ် ချေးယူနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုသည်။
အဆိုပါ ငြိမ်းချမ်းရေး အလှူရှင်များနှင့် တွေ့ဆုံမှုတွင် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့်အတူ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး ဗဟိုကော်မတီ ဒု ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မင်းနှင့် အစိုးရ၀န်ကြီးများဖြစ်ကြသော ဦးစိုးသိန်း၊ ဦးသိန်းညွန့်၊ ဦးအုန်းမြင့်၊ ဦးဇော်မင်း၊ ဦးသန်းဌေး၊ ဦးခင်ရီ၊ ဦးဝင်းထွန်း၊ ဦးခင်မောင်စိုးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး အဖွဲ့ဝင်များ၊ အရာရှိများ ပါဝင်ကြောင်းသိရသည်။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 1:01 PM No comments:
van driver got the shock of his life when the road suddenly caved in beneath him.
The van lying in the sinkhole in Guilin (PIcture: Rex)
The vehicle was seen suddenly disappearing downanewly-formed giant sinkhole onaroad in the city of Guilin, southern China. Luckily, the driver only had slight injuries.
Experts said the cave-in was due to the local geology of the area. The karst landscape in the Guangxi region means when there is rain, the rising water underground can wash away the soil, causingacave-in.
The local public infrastructure company has refilled the sinkhole with soil.
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 12:55 PM No comments:
ရမည်းသင်းမြို့၊ ရွှေလုပ်သားများ အရေးတော်ပုံ
ရမည်းသင်းမြို့၊ မိုးထိမိုးမိတောင်ပေါ်မှ ရွှေလုပ်သားများဟာ မနေ့က (၁၁-၆-၂၀၁၂ ) မနက် (၉)နာရီမှ ဆန္ဒပြတဲ့အနေနဲ့ တောင်ပေါ်မှ ခြေလျင်လျှောက်ကာ ရမည်းသင်းမြို့အထိ ချီတက်လာခဲ့ ကြတာပါ။
ရမည်းသင်းမြို့ ရွှေမြင်တင်တောင်ခြေမှာ ညအခါ နားနေကြပြီး ယနေ့ (၁၂-၆-၂၀၁၂) မနက် (၇)နာရီမှ စတင်ကာ နေပြည်တော်အထိ ခြေလျင်ချီတက်ပြီး ဆန္ဒပြကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မိုးထိမိုးမိတောင်ပေါ် (ရွှေတော) မှ ရမည်းသင်းမြို့အထိ မိုင်ပေါင်းသုံးဆယ်နီးပါးရှိပြီး၊ ရမည်းသင်းမြို့မှ နေပြည်တော်အထိ (၇၅)မိုင်ခရီး ရှိပါတယ်။
ရွှေလုပ်သားတွေဟာ နေ့ဘက်မှာ ခြေလျင်ချီတက်ဆန္ဒပြကြမှာ ဖြစ်ပြီး ညအခါ နားနေကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သက်ကြီးရွယ်အိုများ အမျိုးသမီးများ၊ ကလေးသူငယ်များ ပါဝင်နေကြတာဖြစ်လို့ ဒီခရီးမှာ ရွှေလုပ်သားတွေ အတွက် ကျန်းမာရေးထိခိုက်နိုင်ပြီး လုံခြုံရေး စိုးရိမ်ဖွယ်ဖြစ်နေပါတယ်။
(၁၁-၆-၂၀၁၂)ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းမှာ ရွှေလုပ်သားခေါင်းဆောင်နှစ်ယောက် ရောက်လာပြီး ဆရာတော် ဦးဝီရသူအား အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို လျှောက်ထားကြပါတယ်။
ရွှေလုပ်သားတွေ ဆင်းရဲငတ်မွတ်နေတာ လနှင့်ချီကြာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း ဆန္ဒပြတာလည်း ရက်ပေါင်း အတော်ကြာညောင်းနေပြီ ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။
ရွှေလုပ်သားတို့ ချီတက်မည့်ခရီးက အလွန်ဝေးကွာလွန်းတာကြောင့်လည်းကောင်း လုံခြုံရေး တပ်တွေနှင့် ထိပ်တိုက်တွေ့ပြီး ပဋိပက္ခ ဖြစ်မှာ စိုးရိမ်ရတာကြောင့်လည်းကောင်း ရွှေလုပ်သားများ မထိန်းနိုင်မသိမ်းနိုင်ဖြစ်ပြီး ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများ ဖြစ်ပွားမည်ကို မလိုလားသောကြောင့်လည်းကောင်း ရွှေလုပ်သားများကို ပစ်ပယ်မထားကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပြီး ညှိနှိုင်းအဖြေ ရှာကြစေလိုတဲ့ အတွက် ဆရာတော်ဦးဝီရသူဟာ ယနေ့ ၁၂-၆-၂၀၁၂ မနက် (၁၁)နာရီမှာ ရမည်းသင်းမြို့သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြို့နယ်သံဃနာယက အတွင်းရေးမှူး ဆရာတော်ဦးစန္ဒောဘာသရှိရာ ရန်အောင်မင်းကျောင်း ရောက်သည်နှင့် ခရိုင်သာသနာရေးမှူးက အကျိုးအကြောင်းလျှောက်ထားပြပါတယ်။
နေပြည်တော်ထိ ချီတက်စရာ မလိုအောင် ညှိပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်း မနေ့က (၁၁-၆-၂၀၁၂)မှာ မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးရဲမြင့် ကိုယ်တိုင် ရမည်းသင်းကို ကြွလာကြောင်း ရွှေလုပ်သားအရေးကို အတတ်နိုင်ဆုံး လိုက်လျောကာ ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပေးဖို့ လမ်းညွှန်တိုက်တွန်းသွားကြောင်း ၄င်းနောက် မန္တလေးတိုင်း သစ်တောနှင့် သတ္တုဝန်ကြီး ဦးသန်းစိုးမြင့် ရောက်ရှိလာကြောင်း ရွှေလုပ်သားအရေး ဆွေးနွေးကြကြောင်း၊ ရွှေတော (တောင်ပေါ်) အထိ တက်ကြည့်ကြကြောင်း၊ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေကို ဆင့်ခေါ်၍ တစ်ညလုံး ဆွေးနွေးကြကြောင်း သိရပါတယ်။
ဆရာတော်ဦးဝီရသူတို့ဟာ ရွှေလုပ်သားများရှိရာ ရွှေမြင်တင်တောင်ခြေကို ဆက်လက် သွားရောက်ခဲ့ရာ လုံခြုံရေးတပ်ချထားသည့် ဂိတ်ဝမှာ စောင့်နေကြရပါတယ်။ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေက ဒိုင်းတွေ လွှားတွေ ဒုတ်တွေ သေနတ်တွေနှင့် လက်နက်အပြည့်အစုံ တပ်ဆင်ပြီး အဆင်သင့်အနေအထားနဲ့ လမ်းပိတ်စောင့်ကြပ် နေကြတာပါ။
အကြီးအကဲတစ်ယောက်က သတင်းပို့တာနဲ့ ၀င်ခွင့်ရခဲ့ပြီး ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တို့နှင့် နောက်ဆုံးအခြေအနေကို ဆွေးနွေး ကြပါတယ်။
ရွှေလုပ်သားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် အစုစပ်သူဌေးများကို တိုင်းဝန်ကြီး ဦးသန်းစိုးမြင့်က ညှိနှိုင်းပေးနေလို့ ထိုင်စောင့်နေခဲ့ရပါတယ်။ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် အဖွဲ့ရဲ့ သတင်းတင်ပို့မှုကြောင့် ပထမဂိတ်မှ ဒုတိယဂိတ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ရွှေလုပ်သားများဟာ ရေပြတ်လပ်နေပြီး လမ်းပေါ်မှာ ထိုင်စောင့်နေဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မွန်းတည့်ချိန်မှာ ထမင်းထုပ်များနှင့် ရေသန့်ဗူးများ ပေးသွင်းခဲ့သော်လည်း လူအင်အားနှင့် မမျှတတာကြောင့် သောက်ရေပြတ်လပ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရမည်းသင်းNLD ကသောက်ရေဆက်လှူသော်လည်း ပေးပို့ခွင့်မရလို့ သောင်တင်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယရဲမှူးကြီး ဦးထွန်းနိုင်ထံ ဦးဝီရသူက တင်ပြသောကြောင့် ရေသန့်ဗူးများ သွင်းခွင့်ရသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယရဲမှူးကြီး ဦးထွန်းနိုင်က ရွှေလုပ်သားများနှင့် တွေ့ခွင့်ပေးခဲ့သော်လည်း ရဲမှူးကြီးစိန်လွင်က ပယ်ချခဲ့တာကြောင့် (၄း၃၀)နာရီအထိ တွေ့ခွင့်မရသေးကြောင်း ဆရာတော်ဦးဝီရသူရောက်လာသည့် သတင်းကိုကြားရ၍ ရွှေလုပ်သားများ အားတက်သွားကြောင်း ထိုင်နေရာမှ ထကာ အော်ဟစ် ဆုတောင်းကြကြောင်း၊ရွှေလုပ်သားများနေရာနှင့် ဦးဝီရသူတို့ နေရာဟာ ၀ါးလေးကိုက်ခန့်သာ ဝေးကွာကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။
ယခုအချိန်အထိ တိုင်းဝန်ကြီးနှင့် ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်များ ရွှေလုပ်သားခေါင်းဆောင်များ ဆွေးနွေးလျှက်ရှိ ကြောင်း ရေပြတ်လပ်ခြင်း ထမင်းမ၀ခြင်းစတဲ့ ဒုက္ခအ၀၀ကို မကြည့်ရက် မကြားရက်သည့် အနီးနားရှိ နန်းပေါ်ရွာသူ ရွာသားများနှင့် မြို့နယ်သံဃနာယကအဖွဲ့ဝင် ဆရာတော်ဦးဝိစိတ္တနှင့် ရွာသူ/သားများက ရိက္ခာကိုတောလမ်းမှ ခိုးပို့နေကြတာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ရွှေလုပ်သားများအတွက် ညစာကို သိမ်းကုန်းရွာမှ ဆရာတော် ဦးဝိစိတ္တနှင့် ရွာသူ/သားများက ချက်ပြုတ်လှူဒါန်းကျွေးမွေးဖို့ ပြင်ဆင်နေကြတာလည်း တွေ့ရှိခဲ့ရ ပါတယ်။
ရွှေလုပ်သားအင်အားဟာ မနေ့က ၁၁-၆-၂၀၁၂ ရက်နေ့ တောင်ပေါ်မှ စတင်ဆင်းလာခဲ့စဉ်က (၁၅၀၀)ခန့်ရှိပြီး ပရိသတ် နှစ်သောင်းကျော်က ၀န်းရံလိုက်ပို့ခဲ့ကြပါတယ်။ အဆိုပါ ပရိသတ်ထဲမှ အင်အားငါးရာကျော်ဟာ ရွှေလုပ်သားများထဲ ၀င်ရောက်အားဖြည့်ကာ လမ်းလျှောက်ချီတက်ကြတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။
ယနေ့အချိန်အထိ အင်အားနှစ်ထောင်ခန့် ရှိနေပြီး ဇုန်ပေါင်း (၁၂)ဇုန်မှာ တစ်ဖွဲ့စီခွဲပြီး သီးခြားထားတာကြောင့် အင်အားနှစ်ထောင်ရှိမှန်း မသိသာခဲ့ကြောင်း လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းအရာရှိများနှင့် အာဏာပိုင်များက အင်အားသုံးရာ့ငါးဆယ်ကျော်သာရှိကြောင်း တွင်တွင်ကြီးပြောနေကြပါတယ်။
ယနေ့ ညနေ (၄း၄၅)နာရီမှာတော့ ရွှေလုပ်သားခေါင်းဆောင် အရှည်ကြီးရဲ့ သတင်းပေးပို့ချက်အရ တိုင်းဝန်ကြီးဦးသန်းစိုးမြင့်ဟာ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်များနှင့် ဆွေးနွေးလို့ ပြီးသွားကြောင်း၊ရွှေလုပ်သားဇုန် (၁၂)ခု မှ အလုပ်သမားခေါင်းဆောင်များကို တစ်ဦးချင်းခေါ်တွေ့နေကြောင်း အလုပ်သမားတို့ရဲ့ နစ်နာမှုအခက်အခဲ ခံစားချက်မျိုးစုံကို စေ့စေ့စပ်စပ်မေးမြန်းစုံစမ်းနေကြောင်း သိရပါတယ်။
ညနေ (၅)နာရီမှာတော့ ရဲတပ်ရင်းစုမှူး ရဲမှူးကြီးဦးစိန်လွင်က DVB သတင်းထောက်လူငယ် တစ်ယောက်ကို ငေါက်ငန်းနေပြီး ကင်မရာကိုယူကြည့်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ DVB သတင်းထောက်ဟာ လုံခြုံရေး ချထားရာနေရာမှာပဲ ဆရာတော်ဦးဝီရသူတို့နှင့်အတူ ရှိနေတာပါ။ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းပုံတွေ ရိုက်လို့ဆိုပြီး ငြူစူအပြစ်တင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကင်မရာကို သူကိုယ်တိုင် ယူကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းဓာတ်ပုံများ မတွေ့ရပါဘူး။ ရိုက်သူတစ်ယောက် အငေါက်ခံရသူတစ်ယောက် ဖြစ်သွား ခြင်းပါ။ ရဲတပ်ရင်းစုမှူး ရဲမှူးကြီးဦးစိန်လွင်ဟာ ဦးစန္ဒ ရဲ့ ကင်မရာကို လုယူ အကြမ်းဖက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဆရာတော်ဦးဝီရသူက အကြမ်းမဖက်ဖို့ ၀င်ပြောမှ ကင်မရာကို ပြန်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကင်မရာ မှန်ပြောင်းနှင့် တပ်ဆင်ထားသောအဖုံးကာဗာ ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။
ရွှေလုပ်သားတွေရဲ့ အဓိကအခက်အခဲမှာ တစ်ပိုင်တစ်နိုင်ကျောက်ခွဲ စက်ကလေးများ လုပ်ပိုင် ခွင့်ကို ၅-လပိုင်းမှ စတင်ပိတ်ပင်လိုက်ပြီး စက်ကြီးများကိုသာ ခွင့်ပြုတော့ကြောင်း၊ စက်ကလေးများက စက်ကြီးသွားအပ် လျှင်လည်း တစ်ယောက်တစ်ဝက်နှုံး ပေးရတဲ့အပြင် တခြားကုန်ကျစရိတ်များကိုလည်း နှုတ်ယူကြသောကြောင့် စက်ကလေးပိုင် ရွှေလုပ်သားများဟာ (၂၀)ရာခိုင်နှုံးသာ ရရှိပြီး စက်ကြီးပိုင်ရှင်ကုမ္ပဏီသူဌေးများက (၈၀) ရာခိုင်နှုံး ရရှိသွားကြောင်း၊ အစိုးရနှင့်သူဌေး ပူးပေါင်းပြီး အခြေခံလူတမ်းစား ရွှေလုပ်သားပြည်သူများကို ကုတ်သွေးစုပ် အမြတ်ကြီးစားမှု ဒဏ်ကို ခါးစီးခံခဲ့ကြရာမှ နောက်ဆုံးစားစရာမရှိတဲ့အဆင့် ရောက်လာလို့ ထမင်းငတ်ပြီး အသေမခံနိုင်ဘူး။ ဆန္ဒပြရင်းပဲ အသေခံတော့မယ်ဟု ဆိုကာ ဆန္ဒပြကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ စက်ကလေးများသည် ဇုန်(၁၂)ခုပေါင်းလျှင် (၅၀)ကျော်ခန့် ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စက်တစ်လုံးလျှင် အလုပ်သမား အစိတ် သုံးဆယ်မှ ငါးဆယ်အထိရှိသောကြောင့် စက်ကလေးများကို မှီပြီး အသက်မွေးကြတဲ့ နစ်နာသူ ရွှေလုပ်သားများက မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ကာ ဆန္ဒပြကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။
ညနေ (၆)နာရီမှာ အလုပ်သမားခေါင်းဆောင် ဌေးအောင်ကျော်ထံမှ သတင်းဝင်လာပါတယ်။ ရွှေလုပ်သားတွေ တောင်းဆိုတဲ့ အချက်(၆)ထဲက ငါးချက်သဘောတူညီမှု ရရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တစ်ချက်ကလည်း အလွန်နီးစပ်နေပြီး အမျိုးသားကြီးပွားတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌ မလာသေးလို့ မပြီးပြတ်သေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရွှေလုပ်သားတွေ တောင်းဆိုတဲ့ (၆)ချက်ဆိုတာ
၁။ အင်းနှင့် အက်တာများ ပြန်လည်လုပ်ခွင့် ရရှိရေး
၂။ ဇုန်အသီးသီးရှိစက်ကလေးများ ပြန်လည် လည်ပတ်ခွင့် ရရှိရေး
၃။ ထုံးကြီးတောင်ဒေသ အင်းလုပ်သားများ အင်းအစုပြန်လည် ရရှိရေး
၄။ နစ်နာသော အင်းများအတွက် နစ်နာကြေးပေးရေး
၅။ တစ်လနှင့် ဆယ့်နှစ်ရက်ကြာ နားထားရတဲ့ လုပ်သားများအတွက် နစ်နာကြေးပေးရေး
၆။ အားလုံးပြီးစီးက နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အပြန်အလှန်စာချုပ် ချုပ်ဆိုရေး တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မပြီးပြတ်သေးတဲ့ အချက်တစ်ချက်ဆိုတာ နံပါတ်သုံးအချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သုံးအချက် မပြီးပြတ် သေးရခြင်းမှာ အမျိုးသားတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌ ဦးစောထွန်းရှိန်ကသာ ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အတွက် ဥက္ကဋ္ဌအလာကို စောင့်နေကြခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥက္ကဋ္ဌဟာ ရန်ကုန်မှ လာရမှာ ဖြစ်လို့ ယခု (၆း၃၀)နာရီထိ မရောက်လာသေးပါဘူး။
အဲဒီလို ပြီးပြတ်လု နီးခါမှ ၀န်ကြီးနှင့် အဖွဲ့ဟာ အလုပ်သမားတွေထံ ရောက်လာပြီး သတ္တုဌာန ညွှန်ချုပ်က အလုပ်သမားတွေကို အလုပ်သမားခေါင်းတွေနှင့် သွေးခွဲစည်းရုံးနေပါတယ်။ အလုပ်သမားတွေက လုံးဝမတွေဝေဘဲ တောင်းဆိုချက်တွေ ရရှိတဲ့အထိ ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌဟာ မနေ့က (၁၁-၆-၂၀၁၂)မှာ ဖိလစ်ပိုင်သူဌေးတွေနဲ့ ဆွေးနွေးခဲ့ကာ ယနေ့ (၁၂-၆-၂၀၁၂) မှာ ဟောင်ကောင်သူဌေးတွေနဲ့ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေလုပ်ကွက်အတွက် အစုရှယ်ရာ တစ်စုလျှင် ဒေါ်လာ နှစ်သန်းနှင့် သဘောတူထားကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။
ည (၆း၃၀)နာရီမှာ ၀န်ကြီးနှင့်အဖွဲ့ ပြန်လည်ထွက်သွားကြပါတယ်။ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းအင်အားဟာ တစ်သောင်းကျော်ရှိပြီး ရွှေလုပ်သားအင်အားထက် ငါးဆကျော် သာ နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သူတို့ တစ်တွေဟာ သေနင်္ဂဗျူဟာခင်းသလို စနစ်တကျ နေရာယူတပ်ချထားပြီး ရွှေလုပ်သားတွေကို ၀ိုင်းပိတ်ထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအင်အားတွေကို ကြည့်ပြီး မှတ်ချက် ချနေကြတာကလည်း မှတ်သားစရာကောင်းပါတယ်။ “ရခိုင်မှာ ဆိုရင် ဒီအင်အားတွေ ဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိမလဲ” ဆိုတာပါပဲ ။
ညနေ VOA သတင်းဌာနက ရမည်းသင်းရွှေတောအကြောင်းလွှင့်သွားရာမှာ သံဃာ(၁၀)ပါးနှင့် ပတ်သက်ပြီး သတင်းမှားကို လွှင့်သွားတာ ကြားခဲ့ရပါတယ်။
သတင်းအမှန်က ရွှေလုပ်သားတွေနဲ့ အတူပါလာတဲ့ သံဃာ (၁၀)ပါးကို မြို့နယ်သံဃနာယကမှ စစ်ဆေးရာမှာ (၉)ပါးက မှတ်ပုံတင်မပါခြင်း၊ ၀ါဆိုသံဃာစာရင်းမရှိခြင်း၊ အလှူခံစားနေသည့် နေရာအတည်တကျ မရှိသူများဖြစ်ပြီး ကျန်တစ်ပါးမှာ မှတ်ပုံတင်အတု ကိုင်ဆောင်ထားကြောင်း တွေ့ရလို့ လမ်းစရိတ်ပေးပြီး ဇာတိရပ်ရွာကို ပြန်ပို့လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရမည်းသင်းမြို့ ရန်အောင်မင်းကျောင်းမှ ခေါ်ယူ စစ်ဆေးပြီးမှ ဦးဝီရသူရှေ့မှာ ထပ်မံစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရမည်းသင်းမြို့ ရန်အောင်မင်းကျောင်းမှ ဆရာတော် ဦးစန္ဒောဘာသဟာ မြို့နယ်သံဃနာယကအတွင်းရေးမှူးဖြစ်ပြီး ယခုအချိန်ထိ ဦးဝီရသူ နှင့် အတူ ရွှေလုပ်သားတွေကို အကာအကွယ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ည(၇)နာရီမှာတော့ သိမ်ကုန်းရွာမှ ဆရာတော်ဦးဝိစိတ္တနှင့် အဖွဲ့ကပေးပို့ လှူဒါန်းတဲ့ ထမင်းထုပ်များနှင့် ရေသန့်ဗူးကြီးများ ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ဆန် (၃)အိတ် ချက်သော်လည်း မလောက်င လို့ ထပ်မံချက်ပြုတ် နေကြရကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။
ည(၈း၀၀)နာရီခန့်မှာ ကြွေးကြော်သံများ အော်ဟစ်ကြွေးကြော်သံကြားရလို့ မေးကြည့်တဲ့အခါ ဇရပ်တွေပေါ်မှာ တရားဟောနေတာဖြစ်ပြီး သဘောကျလှတဲ့ ရွှေလုပ်သားများက လက်ခုတ်သြဘာတီးပြီး အော်ဟစ်အားပေးနေတာ ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။
ည(၉း၀၀)နာရီမှာတော့ နောက်ထပ်ထမင်းထုပ် (၁၅၀)ရောက်လာပါတယ်။ဒုရဲမှူးကြီး ဦးထွန်းနိုင်က အရောက်ပို့ပေးပါတယ်။
ထမင်းထုပ်တွေလည်း ပို့ပြီးပြီ။ အလုပ်သမားတွေလည်း နေရာအသီးသီးကို ပြန်ရောက်သွားပြီ ဖြစ်လို့ ဦးဝီရသူတို့အဖွဲ့ဟာ ရမည်းသင်းမြို့၊ ရန်အောင်မင်းကျောင်းမှ မြို့နယ်သံဃနာယက အတွင်းရေးမှူး ဆရာတော် ဦးစန္ဒောဘာသနှင့်အတူ ပြန်လာခဲ့ကြကြောင်း သိရပါတယ်။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 12:48 PM No comments:
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ရင်သွေးများနှင့် ပထမဦးဆုံး တွေ့ ဆုံကြရတော့မယ်
မကြာသောအချိန်ကာလ အတွင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အေင်ဆန်းစုကြည် ဟာ နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လက်ခံရယူတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆုဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကြိုးစားတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားမှုကြီးကို ကမ္ဘာက ထောက်ခံအအသိမှတ်ပြုခဲ့တဲ့ ပြယုဒ်တစ်ခု ဆိုလည်းမမှားပါဘူး။
တဆက်တည်းမှာဘဲ ဒေါ်စုဟာ သူရဲ့ မြေးလေးတွေနဲ့ ပထမဦးဆုံး စိတ်လှုပ်ရှားစွာ မိသားစု ပြန်လည့်ဆုံတွေ့ ကြမယ် အချိန်ကလေးတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ။ ကိုထိန်လင်းဟာ ငယ်ငယ်ဘ၀မှာ အဖေနဲ့ အများဆုံးနေထိုင်ကြီးပြင်းခဲ့ရပြီး ၊ အမေဖြစ်သူလည်း သားငယ်လေးကို အတော်ချစ်ရှာပါတယ်။
ဒေါ်ခင်ကြည်ဈာပနတုံးကဆို သူ့ အမေ နောက်က တကောက်နဲ့ ပေါ့ ငိုနေရှာတဲ့ သူ့ အမေစုကို အပြစ်မရှိတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ ကြည့်ပြီးဘေးနားမှာထိုင်နေရှာတယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ သူတို့ မိသားစုလည်း သူ့ အမေရဲ့ မြန်မာပြည် အာဏာရှင်စနစ် က လွှတ်ြေ့မာက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကို နားလည်မှုပေးကာ မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးနဲ့ ခပ်ဝေးဝေး နေနေခဲ့ကြပါတယ်။
ကိုထိန်လင်းတို့ မိသားစု နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ အမေစု ကို အလိုရှိမှု လွန်ဆွဲ ပွဲ မှာ သူတို့ မိသားစုဟာ နားလည်မှုရှိစွာနဲ့ အရှုံးပေးခဲ့ကြတယ်။
ဒီနေရာမှာ ကိုနေလိင်ိးရဲ့ မူရင်း interview ကိုဖော်ပြပါရစေ
Ko Htin Lin said that, “ She was afraid that it she went she woudn’t be allowed back to Burma,
Kim (Ko Htin Lin) told the weekly in an interview in April 2004, “ It must have been incredibly difficult for her, but at the end of the day, freedom for burma was the important thing to her.I have to respect her reasoning. It wasn’t easy for us, but I am proud she took the decision.”
ကိုထိန်လင်း ရဲ့ နားလည်မှုကို ချီးကျူးအသိအမှတ်ပြုသလို ကျေးဇူးလဲတင်ပါတယ်။ အမေတို့ မိသားစု ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ။
ကိုးကား (Andrew Buncombe, originally published in independence.)
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 12:39 PM No comments:
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ဥရောပ ခရီးစဉ် (13.6.2012) ဓါတ်ပုံ NLD , AP.
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 3:25 AM No comments:
ဗျိုင်းဖြူရွာမှာ ရိုဟင်ဂျာ အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ သတ်ဖြတ်တာ ခံရတဲ့ ရခိုင်ရွာသားများ
စစ်တွေမြို့ ဗျိုင်းဖြူရွာ အခြေအနေ စိုးရိမ်ရေမှတ် အမြင့်ဆုံးသို့ရောက်ရှိ လူမျိုးရေး အသွင်ဆောင်ကာ ဆူပူအကြမ်းဖက် မှုများဖြစ်ပွားနေသော ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့မှ ယမန်နေ့က ထွက်ပြေးလာသော ဘင်္ဂလီ ဆူပူအကြမ်းဖက်သူများနှင့် ဗျိုင်းဖြူရွာအနီး သံတော်လီ ကျေးရွာမှ ဘင်္ဂါလီများ စုပေါင်းကာ စစ်တွေမြို့ ဗျိုင်းဖြူရွာကို မီးရှို့ရန် စီစဉ်နေကြကြောင်း ဒေသခံများက ဇွန်လ ၁၁ နေ့ နံနက် ၉နာရီ ၃၀ မိနစ်တွင် ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ဗျိုင်းဖြူရွာတွင် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ မရှိခြင်းကြောင့် ဒေသခံများမှာ စိုးရိမ်နေကြကြောင်း၊ ယခုအခါ အဆိုပါကျေးရွာတွင် ရခိုင်တိုင်းရင်းသား အမျိုးသားများသာ ကျန်ရှိပြီး အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးငယ်များမှာ စစ်တွေမြို့သို့ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေကြကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။
အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ ရိုဟင်ဂျာ အကြမ်းဖက်သူတွေရဲ့ ရက်ရက်စက်စက် အသတ်ခံရတဲ့ ဗျိုင်းဖြူရွာသားတွေရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို
ကိုဒီမိုဝေယံနဲ့ ကိုလှအေးမောင် ထံမှတဆင့် ရရှိလာခဲ့ပါတယ်။
ဒါကို ရိုဟင်ဂျာ အဖွဲ့အစည်းအခုက ဒီဓါတ်ပုံထဲက တပုံကို “ရခိုင်တွေက ရက်ရက်စက်စက် သတ်လိုက်လို့ ရိုဟင်ဂျာတွေ” Facebook မှာ လိမ်လည်ပြီး တင်ထားတာ တွေ့လိုက်ရပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ကလိမ်ကကျစ် အောက်တန်းကျတာကို အများပြည်သူတို့ သတိပြုကြပါ။ နိုင်ငံတကာကိုလည်း အသိပေးကြပါ။
မီဒီယာကျင့်ဝတ်ကို အတတ်နိုင်ဆုံး လိုက်နာတဲ့အနေနဲ့ အသတ်ခံရသူတွေရဲ့ မျက်နှာကို ဖြစ်နိုင်သမျှ ဖုံးဖိ ဖျက်ပေးထားပါတယ်။
(ဓါတ်ပုံ - ကိုဒီမိုဝေယံနဲ့ ကိုလှအေးမောင်)
Byine Phyu village of Sittwe district is now at the highest risk for villagers to be massacred. Bengalis who withdrew from rioting Sittwe and other Bengalis from Than Thawli village near Byine Phyu rallied to surround and burn the other villages, said local residents at 9.30 a.m on June 11 2012.
Villagers are deeply worried for the lack of security guards and in that village, only Rakhine men were left to guard but women and children were sent to Sittwe.
Credit to The Voice Weekly Journal.
After that, fromawell-known blogger Demo Waiyan and from Ko Hlay Aye Maung, tearful images
of brutally killed Rakhines were received. However, such images are abused by rohingya websites with titles that the corpse were rohingyas. It's justaplain lie.
We must be aware of such lies. Faces of dead persons were faded for media ethic.
အင်္ဂလိပ်လို ဘာသာပြန်ပေးတဲ့ ကိုမျိုးဆက်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
(Thanksalot to Ko Myo Set for his English translation)
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 3:08 AM No comments:
အမေစုရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု့ကို ဂုဏ်ပြုကြိုဆို ကြ
၀မ်းသာစရာ မင်္ဂလာသတင်းလေးမို့ အမြန်တင်ချင်တာနဲ့ ကွန်နက်ရှင်ကိုအံတုရင်း ချက်ချင်းတင်လိုက်ပါတယ်။ အခုပဲ မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားကလွှင့်သွားပါတယ်။ သမ္မတကြီးနဲ့ နုိုင်ငံစုံအဖွဲ့တွေ့ကြပါတယ်။ နော်ဝေကဦးဆောင် လာတာပါ။ နော်ဝေက ပွဲဦးထွက် ဒေါ်လာ ၅ သန်းပေးသွားပါတယ်။ အင်္ဂလန်ကလဲလာသမ္မတကြီးကိုလာ လည် ဖို့ ဖိတ်သွားပါတယ်။ ဒေါ်လာ သန်း ၃၀ ကူညီမယ်လ်ို့လဲကတိပေးသွားပါတယ်။ အီးယူကတော့ ဒေါ်လာ သန်း ၂၀၀ ထိကူညီမယ်လို့ကမ်းလှမ်းသွားသလို ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကလဲ ကြွေးမြီတွေရှင်းပြီးသွားရင် သက်သာသော အတိုးနှုန်းနဲ့ ဒေါ်လာ သန်း ၃၀၀ ထိပေးမယ်လို့ ကတိပေးသွားပါတယ်။ နောက်ပြီးကမ္ဘာမှာမရှိသေးတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ကိုနော်ဝေက ဦးဆောင်ဖွဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပြသနာတွေ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော် ဆောင်မှု့တွေမှာ လိုအပ်တဲ့အကြံညဏ်များပေးပြီး ပူးပေါင်းကူညီသွားဖို့သဘောတူသွားပါတယ်။ ဘရာဗိုပါသမ္မတကြီး။ သမ္မတကြီးနဲ့ အမေစုရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု့ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရုပ်လုံးပေါ်လာပါပြီ။ သမ္မတကြီးနဲ့အမေစုကျန်းမာပါစေ။ နောက်ပြန်လှည့်လို့မရအောင်ချီတုတ်လိုက်တာဖြစ်သလို သမ္မတကြီးနဲ့ အမေစုရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု့ကို ဂုဏ်ပြုလိုက်တာလို့လဲထင်ပါတယ်။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 2:05 AM No comments: